နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Pfs ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက်(22 များအတွက်စုစုပေါင်း Pfs ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် ထုတ်ကုန်များ)
Pfs ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ Pfs ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား Pfs ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် Pfs ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် များထဲမှ Changchun BCHT Biotechnology Co. ။
PFS ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် Attenutated Lyophilized
tag ကို: အဆိုပါ White က Fluey တောင့် , Borosilicate Glass ကိုဖန်ဆင်း , ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် Attenutated Lyophilized
အဘယ်ကြောင့် ACIP ကလေးများအားလုံးအတှကျအရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတစ်စက္ကန့်ထိုးထည့်သွင်းရန်၎င်း၏အကြံပြုချက်များပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့တာလဲ 1995 ခုနှစ်တွင်ကာကွယ်ဆေး licensure အောက်ပါဆယ်နှစ်များတွင်တစ်ဦးရေကျောက်ရောဂါအတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းမှုအဖြစ်ရေကျောက်-related...
PFS ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး Lyophilized Attenutated တိုက်ရိုက်
tag ကို: Changchun BCHT ဇီဝနည်းပညာ Co. , အေးခဲနေသောတားမြစ်ထားသည် , PFS ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက်
[မလိုလားအပ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုး] 1. အိမ်တွင်းမှုလက်တွေ့လေ့လာမှု (1) ဘုံစနစ်တကျတုန့်ပြန်ချောင်းဆိုးနေချိန်တွင်ကုန်ပစ္စည်းအားဖြင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးအဟောင်း 1-12 နှစ်ပေါင်း 600...
tag ကို: ကာကွယ်ဆေးထိုး Semifinished ကုန်ပစ္စည်းများဆေးပညာ , ကာကွယ်ဆေးထိုးအမြင့်အာနိသင်ဆေးပညာ , ကာကွယ်ဆေးထိုးကျန်းမာရေးဆေးပညာ
ထုတ်လုပ်မှု နှစ်ဦးကိုအလုပျသမားဝက်သက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ပြင်ဆင်မှုအတွက်ကြက်သားကြက်ဥအတွက်အဖွင့်ပါစေ။ ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုအများအပြားအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာကိုပဲကိုယ်နှိုက်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။...
tag ကို: ကုန်ပစ္စည်းများ attenuation Bioproducts ပြီးဆုံး , အမြင့် Titer attenuation Bioproducts , ရေကျောက်ဇီဝဗေဒထုတ်ကုန်များမြင့်မားသောအာနိသင်
Adjuvants နှင့်ကြာရှည်ခံ ကာကွယ်ဆေးပုံမှန်အားဖြင့်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဆံ့ adjuvants ကိုယ်ခံစွမ်းအားတုံ့ပြန်မှုမြှင့်တင်ရန်ဖို့အသုံးပြု။ မေးခိုင် toxoid ဥပမာ, များသောအားဖြင့်ပေါ်သို့စုပ်ယူနိုင်ပါသည် alum ။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ aqueous မေးခိုင်...
ရေကျောက်များအတွက် PFS ကာကွယ်ဆေး
tag ကို: ဘိုင်အိုဆေးဝါးနောက်ဆုံးအစုလိုက် , ဘိုင်အိုဆေးဝါး gelatin အခမဲ့နောက်ဆုံးအစုလိုက် , ဘိုင်အိုဆေးဝါးတိုက်ရိုက်နောက်ဆုံးအစုလိုက်
အဆိုပါနာမကျန်းအလွန်ကူးစက်တတ်သည်နှင့်ကာကွယ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲ, ကနှာချေခြင်းသို့မဟုတ်ချောင်းဆိုးခြင်းအားဖြင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သို့မဟုတ်လေမှတဆင့်ဖြန့်ဝေနိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်တစ်စုံတစ်ဦးကရေကျောက်အရည်ကြည်ဖုကနေအရည်နဲ့အဆက်အသွယ်အပြတ်ဖြင့်ရနိုင်သည်။...
ရေကျောက်တိုက်ရိုက်များအတွက် PFS ကာကွယ်ဆေး
tag ကို: Attenutated Lyophilized နထေိုငျ , ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏အသုံးပြုမှုများအတွက်လမ်းညွန် , Injection အဘို့အမြုံရေ
[ရာထူးအမည်နှင့်အသုံးပြုမှု] ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက်, ရေကျောက်-zoster virus ကိုဆန့်ကျင် body`s immuno-လှုပ်ရှားမှုရေကျောက်ကနေလူတစ်ဦးကိုကာကွယ်ဘို့ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ [Specification] အဆိုပါဖလားကိုအဆိုပါ diluent အတူ lyophilized...
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် Attenutated အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale Pfs ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် from China, Need to find cheap Pfs ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on Pfs ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our Pfs ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက်, We'll reply you in fastest.